एक्सेलमा नक्शा घुसाउनुहोस् - भौगोलिक निर्देशांक प्राप्त गर्नुहोस् - UTM निर्देशांक - Geofumadas
घर/कार्टोग्राफी/एक्सेलमा नक्शा घुसाउनुहोस् - भौगोलिक निर्देशांक प्राप्त गर्नुहोस् - UTM निर्देशांक
कार्टोग्राफीगुगल अर्थ / नक्सापहिलो प्रभाव
नक्सा.एक्सएल एक अनुप्रयोग हो जसले तपाईंलाई एक्सेलमा नक्सा सम्मिलित गर्न अनुमति दिन्छ र नक्साबाट सीधा निर्देशांक प्राप्त गर्दछ। तपाईं नक्सामा लाइटलाइट्स र लम्बाईहरू सूची पनि प्रदर्शित गर्न सक्नुहुन्छ।
नक्सामा कसरी एक्सेल घुसाउनुहोस्
एक पटक कार्यक्रम स्थापना भएपछि, यसलाई Map.XL को कार्यक्षमताहरू सहित "नक्सा" भनिने अतिरिक्त ट्याबको रूपमा थपिन्छ।
नक्सा सम्मिलित गर्नु अघि तपाईंले पृष्ठभूमि नक्सा कन्फिगर गर्नु पर्छ, यो "नक्सा प्रदायक" प्रतिमामा गरिन्छ। सेवाहरूबाट छवि वा हाइब्रिडको रूपमा दुबै नक्साहरू प्रयोग गरेर पृष्ठभूमि कन्फिगर गर्न सम्भव छ:
स्ट्रीट नक्सा खोल्नुहोस्
नक्शा दाँया लागिएको देखिन्छ, तर यो ड्र्याग गर्न सकिन्छ ताकि यो अस्थायी हो, वा एक्सेल तालिकाको तल / शीर्षमा।
यो भिडीयोले सारांशलाई यस लेखमा वर्णन गरेको कसरी सारांशमा सारिएको छ, पृष्ठभूमिको रूपमा बिंग नक्साको प्रयोग गरी एक साजिशको ठाडो कार्यमा काम गर्यो।
एक्सेलबाट समन्वय प्राप्त गर्ने कसरी
यो "Get coord" आइकनको साथ गरिन्छ। प्रक्रिया मूलतः हो:
थिच्नुहोस् "कोर्ड प्राप्त गर्नुहोस्,
नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्,
एक्सेलको सेलमा क्लिक गर्नुहोस्
टाँस्नुहोस्, "Ctrl + V", वा दायाँ माउस बटन प्रयोग गरेर र टाँस्नुहोस् चयन गर्नुहोस्।
निर्देशकहरूको सूची कसरी बनाउने?
उदाहरण भिडियोमा देखाइएको टेम्प्लेट Geofumadas द्वारा बनाईएको छ, र तपाईंलाई पहिचानकर्ताको अनुसार समन्वयहरू टाँस्न अनुमति दिन्छ, ताकि पछि तपाइँ अक्षांश र देशान्तर तालिकामा सन्तुष्ट हुनेछन्।
MapXL नि: शुल्क छ, र तपाईं यसलाई यो लिंकबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं उदाहरणमा प्रयोग गरिएको एक्सेल तालिका पनि डाउनलोड गर्नुहुनेछ।
नक्सामा समकक्षहरू पठाउनुहोस्।
यो "विज्ञापन मार्करहरू" प्रतिमाको साथ गरिन्छ, रुचिको तालिकाको क्षेत्र चयन गरिएको छ। त्यसपछि कुन फिल्ड अक्षांश हो, कुन देशान्तर हो, समन्वयको विवरण र नक्साको प्रतीकात्मकता संकेत गर्न एउटा फारम देखिन्छ। तिनीहरूलाई हटाउनको लागि तपाईंले "मार्करहरू हटाउनुहोस्" गर्नु पर्छ।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Map.XL, एक्सेल टेम्पलेट सहित।
यस भिडियोले यस लेखमा वर्णन गरेको प्रक्रियालाई देखाउँछ, उदाहरणको रूपमा ज्वालामुखीमा भ्रमणको संकेत गर्दै, पृष्ठभूमिको रूपमा ओपन स्ट्रीट नक्सा प्रयोग गरी।
नक्सामा UTM समन्वय हेर्नुहोस् Excel बाट:
यो कार्यक्षमता माथि देखाइएको भौगोलिक निर्देशांकहरू देखाउँदछ एक्सेलमा नक्साबाट हेर्नका लागि। यदि तपाईं यो नक्सा निर्देशा that्कहरू देखाउन चाहनुहुन्छ जुन युनिभर्सल ट्रैभर्सो मर्करेटर (UTM) मा छ, तपाईंले यस प्रकारको टेम्प्लेट प्रयोग गर्नुपर्नेछ। छवि र भिडियोमा देखाईएको उदाहरणले त्यसो गर्छ:
तपाई यहाँ टेम्प्लेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
घातक युगमा स्वागत छ
जेभियर एरोचा भन्छिन्:
नाम वा ठेगानाबाट खोजी गर्ने कुनै तरीका छ ??
हो, यो सामान्य काम गर्नु पर्छ।
जुआन जोसे भन्छिन्:
नमस्कार, यो एक्सेल अफिस 365 को लागि सही काम गर्दछ? म यसलाई स्थापना पछि नक्शा ट्याब देख्न सक्दिन।
माफ गर्नुहोस् हामीले देख्यौं।
जुआन पाब्लो मेयेर यो मेयर भन्छिन्:
नमस्ते, नक्सा.xl डाउनलोड गर्नका लागि लिङ्क अझै सक्रिय छैन।
रातो लिङ्क हो।
यहाँ तपाईं सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
नमस्कार सर सुप्रभात।
मैले टेम्प्लेट डाउनलोड गरें तर सफ्टवेयरको लागि कुनै लिङ्क छैन।
कृपया मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
यो मूल (स्पेनी) भन्दा अन्य स्लाइस फरक भन्दा बढी देखिन्छ, लिंक डाउनलोड र फारम दृश्यात्मक छ।
फुटर झण्डा लिंकहरूमा जानुहोस् र स्पेनिश चयन गर्नुहोस्।
त्यसोभए तपाईंले फारम र लिङ्कहरू देख्नुहुनेछ।
तपाईंको भाषामा एउटै लेख हो
Shokit Ali भन्छिन्:
म एक्सेल टेम्प्लेटसँग प्रोग्राम नक्शा .xl डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
Google Earth, डिसेम्बर अपडेट 2008